China Automobile epurasitiki zvikamu Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Mestech inyanzvi muforoma mugadziri pane jekiseni rakaumbwa mota epurasitiki zvikamu. Isu tinopa mukuumbwa kugadzira uye jekiseni remota zvikamu zvemukati nekunze zvidimbu zvidimbu, zvemagetsi subassemblies, uye pasi-hood etc.
Iyo indasitiri yemotokari imhuri hombe yekugadzira michina, inosanganisira ingangoita ese masosi emuchina nemagetsi. Zvikamu zvepurasitiki zvinomiririra 30% ~ 40% yezvikamu zviri mumotokari. Naizvozvo, epurasitiki auto zvikamu zvinotora chikamu chakakura muindasitiri yemotokari.
Mestech inyanzvi yekugadzira muforoma pamapurasitiki jekiseni rakaumbwa zvemotokari Zvikamu. Isu tinopa mukuumbwa kugadzira uye jekiseni remotokari zvikamu zvemukati nekunze zvidimbu zvidimbu, zvemagetsi subassemblies, uye pasi-hood nezvimwewo.
Isu tinogadzira jekiseni kuumbwa uye tinogadzira akasiyana siyana maaumobile zvinhu pazasi:
Air kutonhodza nzira yokubudisa
Instrument Panel Zvikamu
Shifter Knobs & Magungano
Keyless Kupinda Dzimba
Kudzoka Kwemwenje Kudzora & Mabhatani
Mapedhi & Makushoni
Pinza Yakaumbwa Spacer Zvidhinha
Door Bata zvinoriumba
Sunroof Zvikamu & Magungano
Yemukati mhepo vent grilles
Central cheya armrest
Yemukati musuwo mubato zvikamu zvemota
YeMotokari DVD pamberi kesi
Hunhu hwe auto chikamu chikamu.
1 .Size yakakura: auto chikamu senge mota bumpers, fenders, hoods, grilles, madhoo, kumashure, zvigaro zvepamberi zviri muhukuru hwehukuru, saka jekiseni mafomu anofanirwa kugadzirwa muhukuru hukuru zvakare. Izvi zvaizoda kuti jekiseni muforoma vagadziri vape mari pamashini makuru saizi.
2 .Complex pamusoro: chikamu neyakaomarara pamusoro inoda kuvezwa nekumhanyisa uye yakakwira chaiyo CNC.
3 .High mhando: Kune zvakawanda zvikamu pamotokari, zvinoenderana chaizvo. Inoda kwete chete saizi chaiyo, asiwo chitarisiko chakanaka uye kuvimbika. Kunyanya marambi, chiridzwa cheplanethi uye zvimwe zvikamu.
Mould kuyerera ongororo inokurudzirwa kwazvo mukugadzirwa nhanho. Kune yakareba melt kuyerera auto zvikamu senge mota bumpers uye grilles, kushandiswa kweforoma kuyerera ongororo kunogona kupa yakanakisa gating mhinduro uye kudzikisira jekiseni kuumbwa kwekutenderera, akawanda anopisa mabhure anoshandiswa kazhinji.
Mould simbi: S136, NAK80, 738H, SKD61, P20, 718, 718H, 2738, 738, nezvimwe.
Chinyorwa chepurasitiki: ABS, PP, POM, PS, PVC, HDPE, hudyu, etc.
Mould hwaro: LKM
Mumhanyi anopisa: YUDO, Mold Masters nezvimwewo sezvakatsanangurwa.
Zvikamu zvakajairwa: DME, HASCO, nezvimwe.
Plastic jekiseni anoumba kuti motokari
Matipi ekugadzira jekiseni kuumbwa kwepurasitiki mota zvikamu
1 .Automotive zvikamu kazhinji hazvidi zvinongoda zviyero kunyatso asi mhando yepamusoro yepamusoro.
2 .Kuti uwane yepamusoro yepamusoro mhando, zvikamu hazvibvumidzwe kuve nefusion mitsara / mhepo mitsara uye shrinkage mamaki pamusoro pechiso. Naizvozvo, inopisa mumhanyi yekudyisa sisitimu inofanirwa kutorwa kunzvenga yakapinza kona inokanganisa kuyerera mukuumbwa dhizaini.
Isu tinoshandisa yakanaka mhando yesimbi S136, NAK80 uye P20 yekugadzira matanda, cores uye inoisa yeforoma. Isu tinogadzira zvigadzirwa zveyero yeDME, HASCO, MISUMI zvinoenderana nemutengi.
Mestech inogadzira zvigadzirwa kubva kuinjini resini (polycarbonates, GF nylon, PET, PP, nezvimwewo) kune zvigadzirwa zvezvipenga senge acrylic chombo lens uye bezels. Sekondari mashandiro senge sonic welding uye pad kudhinda zvinoshandiswa futi.
Pashure: Plastic electroplating uye vacuum yakanamirwa pamifananidzo
Zvadaro: Kudhinda kwemvura kudhinda zvigadzirwa zvepurasitiki
PC nebwe jekiseni Kuumbwa
Kugadzira kwepurasitiki sirinji